Union Inomhan'arira Qantas Airways Pamusoro Pekutapukira Kwekutapukira uye Kukunda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Union Inomhan'arira Qantas Airways Pamusoro Pekutapukira Kwekutapukira uye Kukunda
Airlines • nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dare remubatanidzwa reAustralia rakatonga richitsigira nyaya yeTransport Workers Union yakanangana neQantas.
Qantas yakadzinga vanopfuura zviuru zviviri vanobata pasi panguva yedenda.
Qantas yakabuda kunze mabasa kuchengetedza mari kukambani.
Qantas yakanyorwa AU $ 18 bhiriyoni ($ 13.2 bhiriyoni) mune mari muna 2019.
Mune chisarudzo chakakosha, dare remubatanidzwa reAustralia rakatsigira Vekutakura Vashandi Mubatanidzwa mune iyo kesi yakaunzwa neTTU kupikisana Mari yezvikamu Qantas Airways Limited.
Mubatanidzwa wacho wakaendesa hofori yendege yeAustralia kudare redzimhosva mushure mekunyadziswa kwevashandi vakaona vanopfuura zviuru zviviri zvevashandi veQantas vadzingwa pakati pehosha yeCOVID-2,000.
Qantas yakadzinga vanopfuura zviuru zviviri vabati vevhu panguva yedenda, vane basa rakaburitswa kunze kuchengetedza mari yesangano, iro muna 2,000 rakanyora AU $ 2019 bhiriyoni ($ 18 bhiriyoni) mumari.
Mutongi Michael Lee akati haagutsikane nehumboo hwakapihwa neQantas - ndege inotungamira yeAustralia - kuti kudzingwa kwezviuru zvevashandi hakuna, kana muchidimbu, kwakakurudzirwa nenhengo yemubatanidzwa.
Iyo TWU yakahaya Josh Bornstein segweta ravo guru kupokana nezvaitwa nendege zvakapesana neFair Work Act. Mhosva iyi yanga yakanangana nekutaura kuti Qantas inokwidziridzwa - inotungamirwa na CEO Alan Joyce - vakaitirwa kupwanya simba remubatanidzwa mukutaurirana kwemihoro.
"Federal Court yakaona kekutanga kuti mushandirwi mukuru akadzinga vashandi vanopfuura zviuru zviviri nekuti yanga ichitsvaga kuvabvisa mukana wekubatana pamwe nekambani pachibvumirano chebhizimusi idzva," akadaro Bornstein.